Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Mandehandeha any Hawaii rehefa vita vaksiny: Fitsipika vaovao
Aviation • Cruising • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Kamaainas • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny 8 jolay lasa teo, ny olona mandeha any Etazonia ao an-trano mankany Hawaii dia afaka mandingana ny lalàna momba ny fitsapana mialoha ny dia sy ny quarantine raha vaksiny tanteraka.
Amin'ity daty ity, ny kaontin'i Hawaii rehetra dia antenaina hanamora ny fetran'ny fivezivezena sy amin'ny fivoriana anatiny sy ivelany.
Ireo nosy dia manantena ny hahita salan'isan'ny vaksiny feno amin'ny fanjakana mitentina 60 isan-jato amin'izay.
Ny fetran'ny fanangonana rehetra ankehitriny dia antenaina hakarina ao anatin'ny roa volana, raha vantany vao mahita ny tahan'ny vaksiny andiany 70 isan-taona i Hawaii.
Ny governoran'i Hawaii David Ige dia nilaza fa vantany vao tratra ny tahan'ny vaksinim-biby, "Hifarana ny programa Safe Travels, ary hanasa ny olon-drehetra izahay mba afaka mandeha any amin'ireo nosintsika. … Miangavy vaksiny. ”
Ny tranga COVID-19 vaovao dia mazàna no mihabetsaka amin'ireo marary mbola tsy vita vaksiny, ary ny vondrona lehibe indrindra dia ny tanora. Angamba aretina ny maha-tanora sy mahatsiaro tena tsy ho resy, na angamba ny tanora noho ny antony ara-tsosialy, ara-politika ary filozofika, dia tsy matoky ny fizotran'ny vaksiny.
Mandray fanapahan-kevitra tsara ve i Hawaii?
Vaovao tsara ho an'ny mpandeha ny fanokafana ny fizahan-tany any Hawaii ho an'ireo mpandeha vaksiny, saingy fanapahan-kevitra hendry ve izany ho an'ny fahasalamam-bahoaka?
Vao haingana, ny Delta variant ny COVID-19 dia hita tany Hawaii ary koa ny tanibe amerikana. Any Israel, nikatona ho an'ny mpandeha vaksiny mihitsy aza izy ireo noho ny ahiahy amin'ny tranga fitifirana noho ny Dika Delta an'ny coronavirus.
Ny variana Delta, izay hita voalohany tany India, dia mandrafitra ny 10% amin'ny tranga rehetra ao Etazonia. Ny variana Delta dia mety ho lasa fatra lehibe an'ny SARS-CoV-2 ao amin'ny firenena araka ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina ( CDC).
Ny sampan-draharahan'ny Laboratoara-panjakana misahana ny fahasalamana (SLD) any Hawai'i dia manamafy ny fiovan'ny SARS-CoV-2 B.1.617.2, fantatra ihany koa amin'ny hoe Delta variant concern, dia miparitaka any amin'ny fanjakana. Ireo olona voan'ny COVID-19 any amin'ny fanjakana dia nateraky ny Delta variant ary tsy nisy nampidirina hopitaly.
Ny Dr. Epidemiolojista fanjakana mpisolo toerana ho an'ny Hawaii, Dr. Sarah Kemble, dia nilaza hoe: "Raha jerena izay fantatsika momba ny karazana Delta sy ireo tranga efa hita tany Hawaii, dia manantena izahay fa hahita tranga fanampiny amin'ny herinandro ho avy. Ny fiarovana tsara indrindra azontsika atao amin'ireo variana dia ny fanaovana vaksiny haingana araka izay azo atao. ”
Fepetra fitsangatsanganana vao avy nandrasana tamin'ny 8 Jolay
Ireo mpitsangatsangana amerikana feno vaksiny manidina an-trano - ao anatin'izany ireo mponina nody mody - dia avela hihoatra ny fameperana amin'ny quarantine sy mialoha ny fivezivezena, raha mbola mampakatra ny firaketana vaksiny ho an'ny tranokala Safe Travels an'ny fanjakana izy ireo ary tonga miaraka amin'ny kopian'ny lisitr'ireo vaksinin'izy ireo. .
Ny isan'ny olona mahazo manatrika fivoriana ara-tsosialy dia hitombo hatramin'ny olona 10 ao an-trano amin'izao fotoana izao ka hatramin'ny 25.
Ny haben'ny fivoriana any ivelany dia hitombo avy amin'ny olona 25 any ivelany ka hatramin'ny 75.
Ny trano fisakafoanana dia avela hampiakatra ny toerany hatramin'ny 75 isan-jaton'ny fahaiza-manao faran'izay betsaka, raha tsy mihoatra ny 25 ny mpanjifa ao an-trano sy 75 any ivelany.
Ny maska ​​dia mbola hotakiana ao an-trano mandra-pahatongan'ny tahan'ny vaksiny 70 isan-jato i Hawaii ary antenaina fa hesorina ny fameperana rehetra.
INFORMATION TRAVEL amin'izao fotoana izao
ny olona vita vaksiny feno ao amin'ny State of Hawai'i dia afaka miditra amin'ny fanjakana tsy misy fitiliana mialoha / fitsaharam-pahafahana manomboka ny andro faha-15 aorian'ny nahavitan'izy ireo ny vaksiny. Ny antontan-taratasy firaketana ny vaksiny dia tsy maintsy apetraka amin'ny Safe Travels ary natonta mialoha ny hiaingany ary ny mpandeha dia tsy maintsy manana kopia mafy an-tanana rehefa tonga any Hawaii.
Vakio bebe kokoa momba ny fomba hanampian'ny vaksinin'ny COVID-19 anao amin'ny fivezivezena eo amin'ireo faritra misy anao any Hawai'i: HawaiiCOVID19.com/travel/faqs.
Ny programa fitsapana mialoha ny dia dia mijanona ho an'ny mpandeha rehetra TSY vaksiny ao Hawai'i.
Ny mpandeha rehetra, anisan'izany ireo avy any Japon, Kanada, Korea ary Taiwan, ary izay mpivezivezy an-trano tsy vita vaksiny any Hawaii, izay niondrana fiaramanidina tamin'ny dingana farany tamin'ny diany nankany amin'ireo nosy Hawaii nefa tsy nanao fitsapana ratsy nandritra ny 72 ora alohan'ny fiaingana. iharan'ny quarantine mandatory.
Ny fanjakan'ny Hawai'i dia hanaiky ny fanandramana fanamafisana ny asidra nokleika (NAAT) fotsiny avy amin'ny valin'ny fitsapana laboratoara fanatsarana laboratoara klinika (CLIA) vokatry ny MPIARAM-PANJAKANA TRANO-TRANO. Ireo mpitsangatsangana dia tsy afaka mahazo ny fitsapana Amplification Acid Nucleic (NAAT) rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Hawai'i.
Ny valim-panadinana ratsy dia tsy maintsy ampidirina amin'ny Safe Travels na vita pirinty alohan'ny fiaingany ary kopia mafy an-tanana rehefa tonga any Hawai'i.
Ireo mpitsangatsangana mankany Maui dia tsy maintsy misintona ny AlohaSafe Alert App ho fanampin'ny fepetra takiana hafa. FITSIDIHANA mauicounty.gov/2417/Travel-to-Maui-County ho an'ny antsipirihany.
Ho an'ireo mpandeha avy any Kanada dia tsidiho azafady Air Madagascar or WestJet.
Ho an'ireo mpandeha avy any Japon dia tsidiho azafady Hawai'i fizahan-tany Japon (Japoney).
Ho an'ireo mpandeha avy any Korea dia tsidiho azafady Korea fizahan-tany Korea (Koreana)
The Kaomandy CDC izay nanomboka nanan-kery tamin'ny 26 Janoary 2021 dia tsy misy fiatraikany amin'ny programa Safe Travels. Ho an'ireo mpitsangatsangana iraisampirenena izay tonga ao amin'ny State of Hawai'i, ny fitsapana avy amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fitokisana ihany no ekena mba hialana amin'ny kararenin'ireo mpitsangatsangana 10 andro.